Qeybtii labaad ee 2015, macmiil ka tirsan shirkadeena oo ku takhasusay soo saarista dhuumaha dheecaannada shubka ah ayaa noo soo diray sawirro. Badeecadda sawirku waxay ahayd dhejisyo. Xirmooyinkan waxaa laga samayn karaa bir bir ah ama bir bir ah. Si kastaba ha ahaatee, shubista birta ayaa fudud in la jebiyo. Marka loo eego jawiga adeegsiga ee macmiilka, waxaan ku talinaynaa macaamilkayaga inuu isticmaalo shubka birta. Sababtoo ah shubka birta ayaa aad u xoog badan, ma fududa in la jebiyo. Oo waxaan u sheegnaa macmiilka inaan u adeegsan doonno wax kabka shubka birta u adkaysta si aan u soo saarno badeecadan. Macmiilkayagu aad buu ugu farxay inuu aqbalay soo jeedintayadii, maxaa yeelay waxay isticmaalayeen qaybaha birta kabka ah, kuwaas oo fudud in la jebiyo oo aan fududayn in la dayactiro. Marka xigta, waxaan go'aaminnay hannaanka wax soo saarka iyadoo loo eegayo sawirrada: ridaya - daboolidda - farsamaynta qallafsan - alxanka - dhammaynta mashiinnada, waxaanan siinnay oraahdeena ku saleysan hannaankan.
Ka dib markii macaamilka uu isbarbar dhigay qiimaha iyo tikniyoolajiyadda wax soo saarka kuwa kale, macmiilku wuxuu go'aansaday inuu amarka na siiyo.
Si loo dammaanad qaado tayada badeecada, waxaan sidoo kale soo jeedinay inaan samayn doono muunad baaris ka hor intaan la soo saarin wax -soo -saarka. Macaamilka ayaa si degdeg ah u oggolaaday.
Ka dib, waxaan bilownay soo -saaridda shaybaarka si waafaqsan hannaanka wax -soo -saarka ee hore loo go'aamiyey. Hal bil kadib, saamigii waa la dhammaystiray. Waxaan baarnay muunadda si waafaqsan shuruudaha farsamada, muunadduna waxay ahayd mid aqoon buuxda u leh. Dulqaadka cabbirka ayaa ku jira xadka la oggol yahay, iyo dhammadka dusha sare ee shaqada ayaa asal ahaan ka hooseeya Ra3.2.
Ka dib markii aan xaqiijinay in tayada alaabtu u qalanto, waxaan u dirnay warqad casuumaad macaamiisheena. Warqadda casuumaadda, macmiilku si dhakhso ah ayuu u dhammaystiray dalabka fiisaha wuxuuna yimid Shiinaha bilowgii Janaayo 2016.
Waxaan u soo qaadnay macmiilkii warshadda, waan nasannay, macmiilkiina waxaan geynay aqoon isweydaarsigii. Macaamilka ayaa si dhab ah u baaray shaybaarka, waxaan si walaac leh u sugaynay gabagabada ugu dambayntiina waxaan helay jawaab: kaamil ah! Kaamil ah!
Amarka waxaa ka mid ahaa 4300pcs oo ah alaab caag ah oo la taaban karo oo biibiile ah, miisaanka guud wuxuu ku saabsan yahay 360tons
Waad ku mahadsan tahay macmiilkayaga kalsoonidooda iyo taageeradooda!